ထွန်းတင်၊ သူရ - ဝီကီပီးဒီးယား
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆဋ္ဌမမြောက် ဝန်ကြီးချုပ်
၂၆ ဇူလိုင် ၁၉၈၈ – ၁၈ စက်တင်ဘာ ၁၉၈၈
(1920-10-02)၂ အောက်တိုဘာ၊ ၁၉၂၀
၁ မေ၊ ၂၀၂၀(2020-05-01) (အသက် ၉၉)
သူရဦးထွန်းတင် (၂ အောက်တိုဘာ ၁၉၂၀–၁ မေ ၂၀၂၀) သည် ၁၉၈၈ ခုနှစ်ကာလတွင် မြန်မာနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။
၁ ငယ်စဉ် နှင့် ပညာသင်ဘဝ
ငယ်စဉ် နှင့် ပညာသင်ဘဝ[ပြင်ဆင်ရန်]
သူရထွန်းတင် ကို ၁၉၂၀ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၂ ရက်နေ့တွင် မြစ်ကြီးနားမြို့၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ တို့ဗမာအစည်းအရုံးဝင်ကျောင်းသား သံမဏိခေါင်းဆောင်နှင့် မြေအောက် တော်လှန်ရေး ခေါင်းဆောင် အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ဥပစာ(သိပ္ပံဘွဲ့)ရရှိခဲ့သည်။
၁၉၄၄ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ဂျပန်ခေတ် တတိယပတ် စစ်တက္ကသိုလ် ဗိုလ်သင်တန်း တက်ရောက်ပြီး နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက် တွင် ကျောင်းဆင်းခဲ့သည်။  လွတ်လပ်ရေး တိုက်ပွဲများတွင် ဗမာ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တပ်ရင်း(၃)၊ တပ်ရင်း(၁)၊ မင်္ဂလာဒုံ စစ်တက္ကသိုလ်နှင့် တိုင်း(၇)စစ်ဌာနချုပ်၊ မျိုးချစ် ဗမာ့ တပ်မတော် တွင် တိုင်း(၇)နယ်မြေ၊ သနက(၄)တို့၌ တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ လွတ်လပ်ရေး မော်ကွန်းဝင် ပထမအဆင့်ကို ရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၄၈-၁၉၄၉ ခုနှစ် အထိ တပ်ရင်း(၅)တွင် တပ်ခွဲမှူး အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေး ရပြီးစ အချိန် ရောင်စုံသူပုန် ဟုခေါ်သော သောင်းကျန်းသူများ ထကြွနေသော အချိန်ဖြစ်သည်။ ကေအမ်ဒီအို တို့ကလည်း အင်အား အကြီးမားဆုံး နှင့် အပြင်းထန်ဆုံး ထိုးဖောက်စစ် ကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ ကေအင်ဒီအို တို့ ထိုးစစ်သည် သံချပ်ကာကားများကို ရှေ့တန်းတင်၍ တိုက်ခိုက်သဖြင့် အင်းစိန်-ရန်ကုန် ကားလမ်းပေါ်ရှိ တပ်မတော်၏ ရှေ့တန်း ကာကွယ်ရေးစည်း ကျိုးပေါက်သွားခဲ့သည်။ စောဘင်ဆင်ခြံ ရှိ တပ်ရင်း ရှေ့တန်း ကွပ်ကဲရေးစခန်း လည်း ကျသွားခဲ့သည်။ ထိုအချိန် ဘီအိုင်အေ ဦးထွန်းရွှေ အိမ်၌ နေရာယူထားသော တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် မှ အခြေအနေ သိသိချင်း တပ်မှူးကြီး ကိုယ်တိုင် အသင့်ရှိသော ရေတပ်မတော်မှ ဘိုဖာအမြောက်တံမြက်စည်းကို ကားလမ်းပေါ် တင်ပြီး ရန်သူ အားမတ်ကော်လံ အလာကို စောင့် အပစ်ခိုင်းခဲ့သည်။ တံမြက်စည်းက ပစ်ရန် အသင့် ဖြစ်လျှင်ဖြစ်ခြင်း ပစ်ကွင်းထဲသို့ ရန်သူကားများ ရောက်ရှိလာခဲ့ရာ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာ ချက်ကောင်းမှန်ပြီး ရန်သူ အားမတ်ကား မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့သည်။ ရှေ့ဆုံးမှ ရန်သူ အားမတ်ကား၏ ကားမောင်းသူကို အရက်မူးအောင် တိုက်ထားပြီး ခြေထောက်ကို သံကြိုးခတ်ချည် သော့ခတ်ထားသဖြင့် ဆင်းမပြေးနိုင်ဘဲ နေရာတွင် ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးခဲ့သည်။ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန စစ်ရုံး ၌ ညအိပ်သော ဦးစီးချုပ်မှလည်း သတင်းရရချင်း အရန်ထားသောရေတပ်မှ ဗိုလ်ကြီး တော်မီရိုက်နှင့် ဘိုဖာအမြောက်များ၊ ဗိုလ်ကြီး မောင်မောင်ကြီး၏ အော်လီကန်ဂမ်းများ စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ယင်းကဲ့သို့ အားမတ်ကားတွေ ထိမှန်ပြီး မတက်နိုင်သော်လည်း ခြေလျင်နှင့်တစ်ဖွဲ့၊ ကားနှင့်တစ်ဖွဲ့ ကေအမ်ဒီအို တို့ ရန်ကုန်ကို ချီတက်ရန် ကြိုးစားခဲ့ကြသည်။ သို့သော် အင်းစိန်အဝင် ကြို့ကုန်း ဘိုးတော်ရာကျော်ကျောင်းတွင် တပ်စွဲထားသော ဗိုလ်ကြီး ထွန်းတင်၏ တပ်ခွဲဂသည် နောက်မဆုတ်ဘဲကျန်ခဲ့သည်။ ဗိုလ်ကြီး ထွန်းတင်ကိုယ်တိုင် သတ္တိရှိရှိ နှင့် ဖြတ်ပြီး ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ရန်သူသည် စစ်သဘောအရ နောက်ကျောမလုံမှု နှင့် စစ်ထိုးမှုကို အထူး ကြောက်ကြရသည့် ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ တစ်ချိုးတည်းဆုတ်ခဲ့ရသည်။ ဗိုလ်ကြီးထွန်းတင်လည်း အင်းစိန်တိုက်ပွဲတွင် သူရဘွဲ့ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရသည်။ အမှတ်(၄)ခြေလျင်တပ်ရင်း(ထိုစဉ်က အမှတ် ၄ ဂေါ်ရခါးသေနတ်ကိုင်တပ်ရင်း- ပထမဆုံးမြန်မာနိုင်ငံသား ဗမာလူမျိုးတပ်ရင်းမှူးအဖြစ်)နှင့်အတူ ရန်ကြီးအောင် စစ်ဆင်ရေးတွင် ပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ တပ်ရင်းမှူး၊ ခေတ္တ တပ်မဟာမှူး၊ စစ်ဦးစီးမှူး (ပထမတန်း)(‌စီမံ/လေ့ကျင့်)၊ ၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင် တပ်မတော် လေ့ကျင့်ရေးမှူး၊ တပ်ထိန်းချုပ်တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
၁၉၇၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၈ ရက်နေ့မှ ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်နေ့အထိကျင်းပခဲ့သော ပထမအကြိမ် ပါတီညီလာခံနှင့် ၁၉၇၃ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၈ ရက်နေ့မှ ၂၁ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပသော ဒုတိယအကြိမ် ပါတီညီလာခံ နှင့် ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၃ ရက်နေ့မှ ၈ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပသော စတုတ္ထအကြိမ် ပါတီညီလာခံတို့၌ ပါတီဗဟို အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင် အဖြစ် ရွေးချယ်ခြင်းခံရသည်။ ၁၉၇၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၇ ရက်နေ့မှ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၀ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပခဲ့သော ပထမအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် နှင့်ပြည်သူ့ကောင်စီ အဆင့်ဆင့်ရွေးချယ်ပွဲ နှင့် ၁၉၇၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှ ၁၅ ရက်နေ့အထိကျင်းပခဲ့သောဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် နှင့် ပြည်သူ့ကောင်စီ အဆင့်ဆင့် ရွေးချယ်ပွဲ ၌ မြစ်ကြီးနား မဲဆန္ဒနယ်(၁)မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် ရွေးချယ်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ အလုပ်သမား ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး၊ သမဝါယမ ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး အဖြစ်တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၉ ရက်နေ့မှ ၁၂ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပခဲ့သော တတိယ အကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပထမ အစည်းအဝေး ၌ နတ္တလင်း မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်(၁)မှ သူရဦးထွန်းတင် အား ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးအဖြစ် ရွေးချယ် တင်မြှောက်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ ၁၉၈၅ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၆ ရက်နေ့မှ ၂၀ ရက်နေ့ အထိ ကျင်းပခဲ့သော စတုတ္ထအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် နှင့် ပြည်သူ့ကောင်စီ အဆင့်ဆင့်ရွေးချယ်ပွဲတွင်လည်း ဒုတိယကြိမ်မြောက် ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်၊ စီမံကိန်း နှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးအဖြစ် ထပ်မံ ရွေးချယ်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင် စတုတ္ထအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အရေးပေါ် အစည်းအဝေး ကို ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေး ခန်းမ ၌ ကျင်းပခဲ့ရာ သူရဦးထွန်းတင် အား ဝန်ကြီးချုပ် အဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ ကြသည်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် ဝန်ကြီးချုပ် တာဝန်မှ အနားယူခဲ့သည်။
စစ်မှုထမ်းကောင်းတံဆိပ်နှင့် နိုင်ငံ့ဂုဏ်ရည်ဘွဲ့(ပထမအဆင့်)ကို ရရှိခဲ့သည်။
၁၉၇၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ဩစတြီးယားနိုင်ငံသို့လည်းကောင်း၊ ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်၊ ဧပြီလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံသို့လည်းကောင်း၊ စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် အမေရိကန် နိုင်ငံသို့လည်းကောင်း၊ ဒီဇင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့တွင် ပြင်သစ်နိုင်ငံ သို့ လည်းကောင်း သွားရောက်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၆ ရက်နေ့တွင် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် နယ်သာလန်၊ ဗြိတိန်၊ ဗဲလဂျီယမ်နိုင်ငံသို့လည်းကောင်း၊ ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့တွင် တရုတ်နိုင်ငံသို့လည်းကောင်း၊ အောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် တရုတ်နိုင်ငံသို့လည်းကောင်းသွားရောက်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင် ဧပြီလ ၂၀ ရက်နေ့ မှ မေ ၂၀ ရက်နေ့အထိ ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ မလေးရှားနိုင်ငံ တို့နှင့် အောက်တိုဘာလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ ၁၉၈၆ ခုနှစ်၊ မေလတွင် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ အောက်တိုဘာလ တွင် အမေရိကန် နိုင်ငံ၊ ၁၉၈၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ တို့သို့ အသီးသီးသွားရောက်ခဲ့သည်။
သူရဦးထွန်းတင်သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မေလ ၁ ရက်နေ့တွင် အမှတ် (၂) တပ်မတော် ဆေးရုံကြီး (ခုတင် ၅၀၀) တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ ကွယ်လွန်ချိန်တွင် အသက် ၁၀၀ ရှိခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
↑ ဘိုဘို (၁၁ မေ ၂၀၁၈)။ ၉၇ နှစ် အရွယ် မြန်မာ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း။ ဘီဘီစီ မြန်မာပိုင်း။ ၁၂ မေ ၂၀၁၈ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ဗိုလ်မင်းညို၊ ဂျပန်ခေတ် စစ်တက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်၊ ပုဂံစာအုပ်တိုက်၊ ၁၉၆၉) စာ ၂၂၃
↑ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း နှစ်ချုပ် ၁၉၈၉။ (ရန်ကုန်၊ စာပေဗိမာန်၊ ၁၉၈၉) စာ၂၄၃
↑ "သူရဦးထွန်းတင် နာရေးကြေညာစာ" (၂ မေ ၂၀၂၀). မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ. Retrieved on ၂ မေ ၂၀၂၀. [လင့်ခ်သေ]
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ထွန်းတင်၊_သူရ&oldid=694310" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၈:၄၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။